Nextdoor waxay soo saartaa Boostada Ganacsiga bilaashka ah, talooyinka ugu wanaagsan | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Nextdoor waxay soo saartaa Boostada Ganacsiga ee bilaashka ah, talada ugu wanaagsan
Nextdoor waxay soo saartaa Boostada Ganacsiga ee bilaashka ah, talada ugu wanaagsan
Nextdoor wuxuu soo bandhigay Boostada Ganacsiga toddobaadkan. Tani waa mid ka mid ah tiro qalab iyo astaamo ay shirkaddu u soo bandhigtay si ay u taageerto milkiilayaasha ganacsiyada yaryar inta lagu jiro COVID-19.
Boostada Ganacsiga waa u bilaash milkiilayaasha laakiin waxay u baahan yihiin bog ganacsi oo maxalli ah oo sheegtaan si loo bilaabo. Waxay ka soo muuqdaan wararka xaafadda Nextdoor.
Tusaalooyinka Boostada Ganacsiga Nextdoor
Gaadhi laba mayl ah Shirkaddu waxay leedahay Boostada Ganacsiga waxay "gaari doontaa dhammaan deriska oo dhan laba mayl u jira ganacsigaaga." Taasi waxay u muuqataa in ay tahay raadiyaha ugu sarreeya, sidaa darteed ma xallin doonto dhammaan baahiyaha ganacsiyada aagga adeegga. Waxaan qiyaasayaa, si kastaba ha ahaatee, in Nextdoor uu samayn doono hagaajin marka ay eegaan xogta oo ay jawaab celin ka helaan milkiilayaasha ganacsiga.
Meheraduhu waxay helayaan laba boosto bishiiba bilaash. Shirkaddu way ka aamustay haddii ay jiri doonto ikhtiyaar lacag ah oo loogu talagalay soo noqnoqoshada badan. Doorashadaasi waxay ku jiri kartaa sabuuradda cad, si kastaba ha ahaatee. Haddii ay jiraan in ka badan shan boosteejo xaafadda hal mar, laga bilaabo meherado badan, Nextdoor waxa ay isu geyn doontaa carousel.
Talooyinka hagaajinta ka dib. Iyadoo kiiska degdega ah ee la isticmaalo uu yahay isgaarsiinta COVID (tusaale, soo qaadis dhinaceeda ah, taxadarka aan qaadeyno, dib u furitaanka ogeysiisyada), Nextdoor wuxuu bixiyaa tiro tusaale oo kale ah oo loo isticmaalo boostada blogka, oo ay ku jirto kor u qaadida fursadaha shaqo.
Nextdoor waxay leedahay boosteejo wehel ah oo bixisa talooyinka ugu dhaqsaha badan ee kor loogu qaadayo soo-gaadhista iyo waxtarka Boostada Ganacsiga:
Qoraalada leh ugu yaraan 5 talobixin ayaa leh 30% hawlgelin sare
Ku dhaji inta u dhaxaysa 5 - 7 galabnimo hawlgelinta sare
Qoraalada Khamiista iyo Jimcaha waxay arkayaan hawlgelin ka badan kuwa toddobaadka ama maalmaha toddobaadka hore
Ku dhaji ugu yaraan hal mar labadii toddobaadba mar
Qoraalada leh sawiro iyo bogag ganacsi oo leh sawiro muuqaal leh ayaa aad loo soo booqday oo waxay leeyihiin ka-qaybgal weyn
Bogga ganacsiga ee dashboard-ka oo leh heshiisyo, cabbirada boostada
Falanqaynta iyo xogta waxqabadka. Fikradaha ka-qaybgalku waxay u iman doonaan dashboardka mulkiilaha ganacsiga, kaas oo si heer qaran ah u soo baxayay bishan. Ganacsiyadu waxay awood u yeelan doonaan inay la socdaan waxqabadka xayaysiisyada heshiisyada gudaha iyo Boostada Ganacsiga. Dhawaan waxay sidoo kale awoodi doonaan inay arkaan boggaga iyo talooyinka isticmaalaha.
Cilmi-baaris uu sameeyay horaantii sanadkan Nextdoor ayaa lagu ogaaday "72% xubnaha [Nextdoor] waxay aaminsan yihiin inay marar badan ku soo noqnoqon doonaan ganacsiyada maxalliga ah" ka dib COVID-19. Tani waxay noqon kartaa ama laga yaabaa inayna xaqiiqo ahaan sax ahayn, laakiin, ugu yaraan, waxay ka tarjumaysaa rabitaanka dadka inay taageeraan ganacsiyada maxalliga ah.
Nextdoor waxa kale oo uu isku dayayay in uu "dib u habeeyo" dhaqankiisa goobta oo uu yareeyo faquuqa iyo cunsuriyadda, kuwaas oo soo ifbaxay dhawaanahan ka dib mudaaharaadyadii Nolosha Madow. Goobtu waxay ku sheegtay iimaylkii ugu dambeeyay ee maamulaha guud Sarah Friar inay leedahay siyaasad aan dulqaad lahayn oo loogu talagalay "dhaqanka cunsuriyadda."
Goobtu waxay ka shaqeysaa 11 wadan waxayna leedahay caymis ku dhawaad ​​250,000 oo xaafado maxalli ah. Waxay ku sii socotaa IPO ugu dambeyntii.
Sababta aan u danayno. Ka ganacsiga ganacsiyada yaryar ee goobta ayaa ah mid aad u dhow. Muddo dhowr sano ah, Nextdoor waxa ay shukaansaneysay summadaha qaranka ee leh joogitaan maxalli ah (tusaale, tafaariiqle) ama doonaya in ay suuq geeyaan macaamiisha maxalliga ah. Macnaha guud ee xaafada Nextdoor ayaa taas ka dhigaya soo jeedin aad uga duwan goobta lagu beegsanayo aaladaha waaweyn sida Google, Facebook ama xitaa Yelp.
Goobtu waxay soo bandhigtaa iibka tooska ah waxayna ka dhigaysaa agab xayeysiis ah oo la heli karo barnaamij ahaan iyada oo loo marayo dhinacyo saddexaad. Waxay bixisaa doorashooyin badan oo la beegsanayo, oo ay ku jiraan danaha, dhaqamada iyo muuqaallada.
Horraantii sannadkii hore, Nextdoor wuxuu sheegay inay jireen in ka badan 2 milyan oo ganacsiyo yaryar ah oo ka shaqaynayay goobta. Tiradaasi waxay u badan tahay inay labanlaabantay ama ka badan tahay maanta. Ka mid ah saldhigga isticmaale ee weyn waxaa shaki la'aan jira milkiilayaasha ganacsiyada yaryar oo badan oo aan si rasmi ah u dejin bogag ganacsi. Bixinta Boostada Ganacsiga ee bilaashka ah waxay u tahay dhiirigelin inay sidaas sameeyaan.
Sidaan horayba u sheegay, Nextdoor waa mid ka mid ah goobaha aadka u yar ee u jeeda macaamiisha leh miisaanka iyo fursada ay ku siinayaan xayaysiisyada xilka haya lacagtooda gudaha.
10 Isbeddellada Tafatirka Sawirka Instgramka Qof kasta oo Suuq geeyaa waa in uu ogaado
Youtube waxay u keentaa YouTube alaabada xayaysiisyada waxqabadka